#5 Brown City - I-Airbnb
#5 Brown City
Losheim am See, SL, i-Germany
Ikamelo e-iqhugwane ibungazwe ngu-LandGut
U-LandGut unokuphawula okungu-107 kwezinye izindawo.
Le Kota yaseFinnish itholakala endaweni yokukhempa enhle kakhulu yaseSaarland futhi iyindawo ekahle yokuhlala abantu ababili. Inombono omuhle ngamahhashi futhi itholakala eduze kwehlathi elimangalisayo. Le Kota inombhede ophindwe kabili onelineni, amathawula, ihitha kanye negumbi lokuhlala elincane. I-Wi-Fi iyatholakala endaweni yokwamukela izivakashi ehhotela. Amashawa nezindlu zangasese kuyahlanganyelwa futhi kusendaweni engamamitha angama-50 ukusuka eKota. Kungenzeka uku-oda ukudla kwasekuseni ngakusasa ekuseni endaweni yokwamukela izivakashi (€10,-).
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-107 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
Miningi imizila yezintaba kule ndawo. Imizila icocekile kakhulu futhi kunezimpawu eziningi ezikukhomba endleleni efanele. Ungacela incwajana yamahhala yokuhamba ngezinyawo endaweni yokwamukela izivakashi!
Hlola ezinye izinketho ezise- Losheim am See namaphethelo